Giorgio Chiellini oo qaliin maray… (Ogoow mudadda uu maqnaanayo) – Gool FM
Giorgio Chiellini oo qaliin maray… (Ogoow mudadda uu maqnaanayo)
Dajiye September 3, 2019
(Turin) 03 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku shaacisay Website-keeda rasmiga ah in si guul ah looga gudbay qaliinkii lagu sameeyay Giorgio Chiellini, si uu kaga soo kabsado dhaawaca ka soo gaaray Jilibkiisa lugta midig.
War rasmi ah ee ka soo baxay kooxda Juventus ayaa lagu shaaciyay in Giorgio Chiellini uu garoomada ka maqnaan doono inta badan xilli ciyaareedkan.
Macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaan ku xisaabtami doonin adeega Giorgio Chiellini mudo dhan 6 bilood.
35 jirkan ayaa soo gaaray dhaawac dhanka jilibka ah inta lagu gudi jiray tababarka Juventus, iyadoo war rasmi ah ee ka soo baxay kooxda lagu sheegay:
“Giorgio Chiellini wuxuu maanta maray qaliin jilibka lugta midig ah si uu kaga soo kabsado dhaawaca uu ka qabo”.
“Qaliinkan waxaa fuliyay Professor Christian Fink, waxaana ku wehliyay dhakhtarka kooxda Juventus ee Dr. Tsironis, wuxuuna qaliinka ku dhamaaday si guul ah”.
“Waqtiga soo kabashadiisa waxaa la filaayaa inay gaari doonto mudo 6 bilood ah”.
Dhaawaca soo gaaray Giorgio Chiellini ayaa waxay war wanaagsan u tahay daafaca reer Holland ee Matthijs de Ligt kaasoo fursad u waayay inuu ka soo muuqdo shaxda Juve kulankii furitaanka ee horyaalka Serie A, laakiin kaddib dhaawaca Chiellini waxaa iska cad booskiisa kooxda.
Taageerayaasha Barcelona oo doortay heshiiskii ugu muhiimsanaa ay kooxda ka sameysay suuqii kala iibsiga ee xagaaga